China china n95 nkpuchi eme igwe ihu nkpuchi ntị loop ịgbado ọkụ igwe Akpaaka ntị gbalaga ịgbado ọkụ igwe ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | Haojing
A na-ejikarị igwe eji arụ ọrụ igwe eji arụ ọrụ maka ihe mkpuchi N95 masks, naanị otu onye chọrọ ka ọ rụọ ọrụ. Site na mpempe akwụkwọ na igwe bandeeji, enwere ike mepụta nkpuchi zuru oke. Ọ nwere ike ịmepụta ihe nkpuchi 20 kwa nkeji.
Ngwaọrụ ahụ na-eji ihuenyo mmetụ aka iji rụọ ọrụ, nke dị mma na ngwa ngwa, a ga-ahụkwa ntọala ntọala ahụ n'ụzọ doro anya, a kwadebere ngwaọrụ ahụ na njirimara ntụpọ, nke nwere ike ịchọta mmejọ ngwa ngwa ma dozie ha n'oge.
Akụkụ nke akụrụngwa na-eji ụdị ndị ama ama, dịka Schneider, Siemens na AirTAC na ndị ọzọ. Anyị nwere ike hazie akụrụngwa dịka ndị ahịa chọrọ.
Tupu ebufe akụrụngwa ahụ, anyị ga-ebu ọgwụgwọ nchara ọgwụ maka akụrụngwa ahụ ma gbaa vidiyo arụmọrụ iji hụ na onye ahịa nwere ike iji akụrụngwa ahụ na-ejikarị.
Ejiri maka eriri igwe KN95 na-agbado ọkụ, enwere ike iji ya na mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ iji mezue mmepụta nke ihe nkpuchi niile. A na-ejikarị ya eme ihe na ngwaahịa ọcha, ngwaahịa ọgwụ, ngwaahịa nchekwa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
30 ~ 40pcs / nkeji
Ebu Denye nke nkpuchi
Karịsịa iji tinye nkpuchi nkpuchi na eriri ntị ntị site na eriri ebu
Efere nrụgide, enwere ihe mmetụta ebe a, ọ bụrụ na enweghị nkpuchi, a gaghị etinye nrụgide. Ọ bụrụ na ị nwere nkpuchi, ịnwere ike itinye nrụgide na akwa imi nke nkpuchi ebe a iji kwado ịgbado ọkụ nke ụdọ ntị
Mmetụta ọrụ ọrụ, nhazi ọrụ nlele anya
Igwe eriri ntị
Igwe ụdọ ntị nwere ike ịhazighachi eriri nke eriri ntị iji nyere aka mbugharị
Nke gara aga: OEM mkpu Machine 3ply china ewepụghị nkpuchi igwe High-ọsọ ụgbọelu slicing igwe
Osote: ntuziaka nkpuchi Ndinam igwe emepụta ntị akaghị ihu nkpuchi igwe Nsukka
Face nkpuchi ntị Loop ịgbado ọkụ Machine
ewepụghị nkpuchi mmepụta igwe earloop nkpuchi machi ...
ntuziaka nkpuchi Ndinam igwe emepụta ntị lo ...